यसरी छान्नुहोस् कलेज – Nayapath.com
भर्खर एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कलेजहरुका लोभलाग्दा विज्ञापन पनि सार्वजनिक भएका छन् । हेर्दा लाग्छ कुनै भन्दा कुनै कमी छैन । सेवा, सुविधा र गुणस्तरको लामो फेहरिस्त भेटिन्छ नै । यो समय विद्यार्थी भाइबहिनीका साथै अभिभावकमा पनि एक खालको अन्योल सिर्जना हुनु स्वभाविक नै हो ।
हिजो एसइईको नतिजा कस्तो आउने हो ? भन्ने चिन्ता थियो भने आज कुन कलेज छनोट गर्ने ? अर्को चिन्ता थपिएको हुनुपर्छ । कलेज छनोट गर्दा थोरै ध्यान दिन सकिएन भने एकातिर सन्तानको भविष्य नै बिग्रने डर अर्कोतिर जीवनभर पछुताउने पनि हुन सक्छ । तसर्थ सही कलेज छनोटले विद्यार्थीको भविष्यलाई पक्कै सही मार्ग निर्देश गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति केही मूलभूत कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
कलेज छनोट गर्दा कलेजको विगतका बारेमा सोधखोज गर्नुपर्छ । विगतको शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थीको क्रियाशिलता, त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु केकस्ता संस्थामा आवद्ध छन् । संस्थाभित्रको आन्तरिक वातावरण कस्तो रह्यो ? त्यसबारेमा जानकारी लिएर मात्र भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्छ । विद्यालय र विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध, नतिजा सुधार उन्मुख रहेको नरहेको के कस्तो छ ? त्यसको बारेमा पूर्व जानकारी लिएर मात्र अघि बढ्नु पर्छ । खराब इतिहास बोकेका विद्यालयमा सकभर भर्ना नहुनु नै राम्रो हो ।
पूराना विद्यार्थीको अनुभवः
भूतपूर्व विद्यार्थीमा विद्यालयका सम्बन्धमा लामो अनुभव हुन्छ । उनीहरुलाई विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक वातावरण, प्रशासनिक संरचना, निजी विद्यालय भएमा लगानीकर्ताका बारेमा समेत जानकारी हुनाले त्यस्ता अनुभवी विद्यार्थीको सुझाव र सल्लाहले समेत विद्यालय छनोटमा सहयोग पु¥याउँछ । आफूले चाहे जस्तो र उपर्युक्त वातावरण भए नभएको जानकारी मिल्न सक्छ।
शैक्षिक वातावरण र शिक्षक समूहः
विद्यालय छनोटमा शैक्षिक वातावरण र शिक्षक समूहको ख्याल गर्नुपर्दछ । विज्ञापनको भ्रममा नपरी वास्तविकता के हो ? यसलाई बुझ्न जरुरी छ । शैक्षिक व्यक्तित्वको संलग्नता छ कि छैन ? शिक्षक समूह कत्तिको सिर्जनात्मक र अनुभवी छन् ? शिक्षाको गुणस्तरमा शिक्षकको भूमिका अहम् रहन्छ ।
आफ्नो घरको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मात्र कलेज छनोट गर्न उपयुक्त हुन्छ । आम्दानीको स्रोत, बचतलाई हेरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्छ । घरको आर्थिक अवस्थाले थेग्न नसक्ने महंगो कलेज छनोट गर्नुहुँदैन । यसले एक त समयमा कलेजको शुल्क तिर्न नसकेमा मानसिक तनाब दिन्छ भने बिचमा नै कलेज छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । महँगो शुल्क तिर्दैमा पढाइ राम्रो हुने होइन । बरु आफ्नो आम्दानीले भ्याउने सम्मको कलेज छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भर्नाका बेला छात्रवृत्ति दिने तर पछि नदिने जस्ता समस्या पनि आएकाले विद्यार्थी त्यसतर्फ सजक बन्न आवश्यक छ ।
न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार :
भौतिक पूर्वाधार पनि शिक्षण सिकाइको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कक्षाकोठाभित्रको अवस्था, प्रविधिमैत्री भए नभएको र आफूलाई उपयुक्त खालको छ कि छैन । कलेजले केवल पढाउँछ मात्र कि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि गराउँछ ? त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
तसर्थ विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले प्रथम त आफूले कुन विषय पढ्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवारको दबाव र साथीभाइको लहलहैमा लागेर विषय वा कलेज छनोट गर्नु राम्रो होइन । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ख्याल गरेर मात्र विषय र कलेज चयन गर्दा भोलिको भविष्य सुन्दर बनाउन सहयोग पुग्छ ।